Vaovao - Inona no karazana solomaso tianao hotratrarina amin'ny ho avy?
Taloha dia nahatsapa isika rehetra fa ireo tovovavy lehibe manao solomaso dia nerd, mahatsikaiky ary tsy mahatsikaiky. Na izany aza, tato anatin'ireo taona faramparany, marika marika «flyover» maro be no nanohana azy ireo, ary ny solomaso izay tsy tian'ny olona rehetra dia lasa lamaody lasa lamaody vaovao.
Ny tovovavy manana maso efatra dia mitafy solomaso tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fampandehanana, fa izao dia lasa mifantoka kokoa amin'ny famolavolana endrika. Manamboatra solomaso isan-karazany mihitsy aza izy ireo any an-trano mba hifanaraka amin'ny fanao isan'andro.
Ity fironana geek chic ity dia nentina tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2020. Rehefa hitanao fa manohana ny gucci, any Prada, fendi, chloe, ary na i Chanel aza, mino aho fa tena tsy azo sakanana io fironana solomaso fisaka io.
Raha ny marina, raha voafantina tsara ny kojakoja dia hanampy voajanahary ny fijery azy io. Noho izany, amin'ny maha-tovovavy lamaody anao, dia mila mianatra mifidy endrika mety aminao ianao aloha.
Raha afaka mahatsapa ny haitao hibernation ny olombelona ao amin'ny tantara foronina "Science-Three", dia karazana solomaso inona no tadiavinao amin'ny ho avy?
Inona no karazana solomaso mbola tsy mahazatra na amin'ny ho avy aza, mitarika hatrany ny fironana, na dia mihoatra ny fotoana aza?
Vao tsy ela akory izay, misy sarimihetsika foronina siansa roa miavaka, "Blade Runner 2049" sy "Ready Player One". Ireo sarimihetsika roa ireo dia mamaritra ny "tontolo ho avy", fa ny tontolo ho avy izay aseho amin'ireo horonantsary roa ireo dia samy hafa tanteraka. ny.
Ao amin'ny tontolon'ny "Ready Player One", ny olombelona dia miankina tanteraka amin'ny traikefa an-tampon'ny VR avo lenta.
Mamo sy lao izao tontolo izao ao amin'ny "Blade Runner 2049", ary nampitombo ny fanirian'ny olombelona ny haitao mahery vaika. Ny sunglass futuristic indrindra ampahafantarinay anao, avant-garde no mampiavaka azy.
Amin'ny sanganasa cyberpunk sy ny fahitalavitra, matetika potika ny tontolo ho avy. Ao amin'ny tanàna ho avy misy skyscrapers ary mirona telo-dimensional, dia misy mponina marobe ambany ihany koa sy sisintany ara-tsosialy miaina amin'ny arabe tery feno olona. Mifanohitra tanteraka ny teknolojia mandroso, ny jiro neon mahafinaritra ary ny olona bitika, ny fitiavana malefaka, ny fankahalana ary ny fankahalana.
Ny loko tsara tarehy dia singa ilaina amin'ny cyberpunk. Manoloana ny teknolojia mangatsiaka, ny loko dia maneho ny fihetseham-po marefo sy manankarena amin'ny zanak'olombelona. Ny DLL5333 dia misy rafi-by vita amin'ny metaly kanto sy volom-boasary volomparasy tsara tarehy, ary ny loko tsara tarehy dia tsy hay hadinoina.
Niverina indray ny endriny solomaso saka miaraka amin'ny tsiro Retro tamin'ny taona 80. Ho fanampin'ny fahatsapana filalaovana sy kanto, ny solomaso saka dia misy fiantraikany amin'ny fanovana ny drafitra. Stella mccartney dia mbola voaravaka kofehy kintana. Ny endrika dia mahasarika maso ary azo antoka fa mety ho lasa manasongadina ny endrika. Raha heverinao fa fahita loatra ny solomaso monochromatic dia afaka misafidy solomaso sokatra ianao. Ny solomaso Tortoiseshell dia efa safidin'ny firafitra manankarena foana, fa afaka manasongadina ny toetran'ny zavakanto ihany koa. Ny solomaso mitovy anarana avy amin'ny mpamorona alemana wolfgang proksch dia mitambatra fitaovana samy hafa, miaraka amin'ny zana-kazo sokatra caramel tortoiseshell sy sandry vy. Ny famolavolana sary dia manan-karena amin'ny lafiny telo, izay tena mety amin'ny ankizivavy lamaody miaraka amin'ny myopia.
Amin'ny maha-tovovavy tia hatsarana, ankoatry ny fampiasa, ny lamaody dia tena manandanja koa rehefa mividy solomaso, sa tsy izany? Raha manaiky ianao, dia ho anao irery ireo sary famolavolana haingon-trano ireo! Ny marika solomaso noho ny zava-kanto avy any Londres dia nifantoka foana tamin'ny solomaso izay lamaody sy kanto kanto. Voaravaka perla telo eo amin'ny sisiny havia sy havanana ity endriny metaly saka-maso manify ity, ary marefo be ilay fomba. Ho fanampin'ny zava-kanto, ny vanim-potoana Alexander McQueen, Gucci, Chloe ary marika hafa koa dia namoaka karazana endrika haingon-trano.
Ny fahaterahan'ny solomaso fiaramanidina dia mifandray akaiky amin'ny mpanamory fiaramanidina. Io no solomaso namboarin'ny Bausch & Lomb Company ho an'ny mpanamory fiaramanidina manohitra ny stratosfera. Izy io dia mandrafitra endrika amam-pitoviana ary vita amin'ny vy vita amin'ny vy maivana. Mifanohitra amin'ny endrika ambony amin'ny endrik'ireo solomaso saka, ny solomaso ny Aviator Glasses dia manana endrika miroraka amin'ny lafiny roa, izay hahatonga ny olona hifantoka amin'ny tapany ambany amin'ny tarehy. Noho izany dia mety kokoa ho an'ny zazavavy lava volo maranitra ihany koa izy, ary ireo manana tarehy fohy sy malalaka dia tokony hiezaka ny hialana.